Taliyihii Booliska Minneapolis oo xilka iska casishey kadib dilkii uu geystey Maxamed Nuur – Balcad.com Teyteyleey
Taliyihii ciidanka Booliska magalada Soomaalidu ku badan tahay ee Minneapolis Janee Harteau ayaa xilkii iska casishey, kadib markii Mayorka magaaladaas Besty Hodges ka codsatey in ay is casisho, sabab la xiriirta dil uu geystey askari ka tirsan ciidanka Maraykanka oo asalkiisu Soomaali yahay kaas oo dilay Justine Ruszcyk oo u dhalatey dalka Australia.
Dilka gabadhan ayaa abuuray caro xoogan, kadib amrkii Boolisku caddeyn waayey sababta lagu diley. Raysalwasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay inay dowlada Maraykanka ka sugayaan inay ka jawaabto sababta loo dilay haweenayda u dhalatay dalkiisa ee Justine Damond.
Justine (Ruszcyk ) Damond ayaa la sheegay in habeenkii Sabtida ay wacday Booliiska, iyadoo sheegtay in qof lagu weeraray meel u dhaw guriga ay degenayd, booliiska ayaa markii ay goobta gaareen, waxay maqleen dhawaaq weyn, kadibna Askari Maxamed Nuur ayaa xabad riday, waxayna ku dhacday haweenaydan oo u dhimatay dhaawacii soo gaaray.
Dhawaaqa ay maqleen askarta ayaa la hadal hayaa inay ahayd baaruud ku qaraxday meel uu dhaw gaariga ay askarta wateen, taasina loo maleenayo in ay keentay in askariga uu xabada rido. Walow aan arrintan la hubin.
Maxamed Nuur iyo Askarigii kale ee la socday ayaa sidoo kale shidin camera-da ku rakiban dharkooda oo lagu khasbay askarta Maraykanka inay shidaan xiliga ay hawlgalka ku jiraan, taasi oo ah mid jabineysa sharciga uyaal booliiska.
Askeriga dilka geystey ayaa diidey in uu bixiyo wax waraysi ah, waxaana uu ka fariistey shaqada.